Taylor Swift Fashion နဲ့ Brand များ……. – FemaleWear.net
Taylor Swift Fashion နဲ့ Brand များ…….
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေး အများစုရဲ့ အချစ်တော် Taylor Swift ရဲ့ Fashion တွေအလှည့်ပါ။ သူမကတော့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး Fashion ပိုင်းမှာလည်း သူများတွေလို sexy ဘက်မသွားဘဲ ချစ်စရာကောင်းအောင် လူအများကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Taylor Swift Fan တွေအတွက် Taylor fashion တွေနဲ့ သူမ ဝတ်တဲ့ brand တချို့ကို ဝေးမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုဝတ်ထားတာလေးကတော့ GUCCI ကဖြစ်ပြီး Spring 2018 အတွက် ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ဖြစ်တဲ့အတွက် စျေးနှုန်းကတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဒီပုံထဲက cap လေးကတော့ GUCCI Spring 2018 cap ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ဖြစ်တဲ့အတွက် cap လေးရဲ့ စျေးနှုန်းကိုလည်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးပါဘူးနော်။
Blouse အင်္ကျီအနက်လေးနဲ့ pant ကတော့ RODARTE brand က Tulled Cropped Blouse နဲ့ Quilted Leather Pant ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ Spring 2018 collection တွေဖြစ်တဲ့အတွက် စျေးနှုန်းတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ Website မှာကို officially မထွက်သေးပါဘူး။ ring တွေကတော့ Chanel, Dior, Van Cleef and Arpels တို့ကဖြစ်ပါတယ်။
Chanel ‘Plume de Chanel Diamonds and Pearl Ring’ – $6,800.00
Dior ‘Rose Dior Pré Catelan Ring’ – available in store only
Van Cleef and Arpels ‘Diamond Gold Double Ring’ – $27,307.00
Dior ‘Rose Dior Bagatelle Ring’ – available in store only
Chanel ‘Bouton de Camelia Ring’ – $5,100.00
Chanel ‘Plume de Chanel Ring’ – $12,400.00
ဒီပုံထဲက SILVER SNAKE RING လေးကတော့ $60 USD ရှိပြီး အရောင်တွေကလည်း မျိုးစုံထွက်ရှိထားပါတယ်။
ဒီ အနီရောင် top bra နဲ့ skrit လေးကတော့ Alexander McQueen ကဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းလေးတွေကတော့ Alexander McQueen ‘Knitted Bra Top’ – $1,195.00 ဖြစ်ပြီး Alexander McQueen ‘Jacquard Knit Skirt’ – $4,195.00 ဖြစ်ပါတယ်။ Taylor ရဲ့သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ သိပ်လိုက်ဖက်တဲ့ ဝတ်စုံလေးပါ။
ဒီ leather လေးကတော့ Saint Laurent Spring 2018 dress ဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းကတော့ သူတို့ရဲ့ Website မှာကို officially တင်ထားတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။.
Fashion ပိုင်းမှာလည်း အမြဲသတိထားအတုအခိုးကောင်းစရာတဲ့ Taylor ကတော့ လူငယ်ပီပီ အမြဲတက်ကြွပြီး သူမရဲ့သီချင်းအသစ်တွေကိုလည်း အလန်းစား setting, အမိုက်စား ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ မကြာခင်ဘဲအသစ်တွေထွက်ရှိထားပါသေးတယ်နော်။
Image Source : https://www.instagram.com/taylorswift/
Style ကျပြီး နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်လို့ရမယ့် Sneaker (၁၀)မျိုး
ZARA ရဲ့ ယခုလက်ရှိ sale ချနေသော အနွေးထည်များ…..